В южнокорейской провинции Чхунчхон-Пукто пройдет фестиваль картофеля — Картофельная Система
Bandhiga baradhada ee lagu qaban doono gobolka Kuuriyada Koonfureed ee Chuncheon Phukto
Gobolka Koonfurta Kuuriya ee Chungcheongbuk-do, waxaa lagu qabanayaa dabaaldega Gammul Dabaqa baradhada. Waxaa soo weriyey Yonhap News iyada oo la tixraacayo ilaha laga soo xigtay.
Sida ay sheegeen ilo wareedyo, Bandhig baradhadeedka sagaalaad ayaa lagu qaban doonaa degmada Kammul-myeon ee Gobolka Kwisan 22-ka Juun, 2019.
Waxaa la ogsoon yahay in inta lagu gudajiro dabbaaldegga inaad kaqayb qaadan karto qodista baradhada. Dhammaan kaqeybgalayaasha, oo ay bixiyeen 5 kun oo guuleystey (~ $ 4,22), waxay qaadan karaan ilaa 5 kg oo baradho ah oo la qoday.
Sidoo kale, qaab dhismeedka xafladda, qof walba wuxuu awoodi doonaa inuu dhadhamiyo suxuunta kala duwan ee baradho ah, ka qeybqaato tartan loogu talagalay cunidda baradhada xawaare sare leh, dhismaha munaaradaha baradhada, xaraashyo gaar ah, iyo sidoo kale inay ku raaxeystaan ​​jilitaanka muusikada.
Beeralayda Kyrgyz waxay yareeyaan dhir baradhada sanadka 2019
Warbaahintu waxay ogaatay ku-guuldaraysiga soo-dejinta bedelida caano iyo baradhada
Goynta baradhada ee Sanadka 2019 waxay kori doontaa 22,8 milyan oo tan
Ruushka, sicirka xididdo hore ayaa hoos u dhacay
Silsiladda dukaamada waaweyn ee UK waxay iibiyaan miraha iyo khudradda oo aan xirnayn
Kuwa iska leh dhulka Ruushka: 20ka guri ee ugu qaalisan Ruushka. Qiimeynta Forbes